Ireo kojakoja ho an'ny fitsidihana bisikileta
Jereo indray ireo bisikileta
Ny mpianakavy tsirairay dia tokony hahita ny hafainganam-pandehan'ny fiara mitondra aina
Halaviro ny fikolokoloana tafahoatra amin'ny fitsangatsanganana bisikileta
Aza miala amin'ny bisikileta ary ampiasao ny fomba hafa
Ny fianakaviana izay tsy mandeha bisikileta matetika dia afaka manandrana ny tànany amin'ny halavirana fohy kokoa aloha. Amin'ny fitsangatsanganana manaraka dia misy foana ny fahafahana misafidy làlana lava kokoa, izay mety manana ambaratonga avo kokoa koa. Fa tsy ny halavan'ny zotra ihany no tokony hojerena. Misy dikany ny mijery manokana raha tsy maintsy mianika havoana ny mpianakavy mandritra ny fitetezam-paritra ataon'izy ireo.
Ny bisikileta mankany amin'ny havoana mideza dia mety ho mavesatra indrindra ary mitaky tanjaka lehibe. Ny mpianakavy tanora kokoa dia mety tsy ho mahafehy manokana ireo faritra ireo. Ny làlan'ny bisikileta mora dia mety amin'ny fitsangatsanganan'ny fianakaviana milamina. Raha vao misy làlana tsara ho an'ny fitsangantsanganana ataon'ny fianakaviana, dia mety ho hita ireo kojakoja fitetezam-paritra.
Misy kojakoja ilaina ihany koa amin'ny fitsangatsanganana amin'ny bisikileta. Rehefa mandeha mitsangatsangana amin'ny bisikileta dia misy dikany ny manao fiarovan-doha amin'ny bisikileta. Misy ihany koa ny safidy mitafy mpiaro amin'ny kiho sy ny lohalika. Ny sasany amin'ny bisikileta dia manao fonon-tànana bisikileta ihany koa. Ireo kojakoja ireo dia manome fiarovana vitsivitsy raha sendra misy fianjera na tranga toy izany rehefa mitsangatsangana.
Ho fanampin'izay, ny mpikambana ao amin'ny fianakaviana dia tokony hisafidy kiraro mety amin'ny bisikileta. Mazava ho azy fa misy kojakoja hafa izay ilaina amin'ny fitsangatsanganana bisikileta. Raha misy fitsangatsanganana lavitra kokoa dia tsara ny mitondra tavoahangy feno rano miaraka aminao. Bisikileta maro no manana mpihazona tavoahangy fisotroana mba hahafahan'ny tavoahangy mametraka tsara ao amin'ilay mpihazona omena.
Ny tsakitsaky kely dia azo alaina ihany koa amin'ny fitsangatsanganana bisikileta, raha sanatria ny fianakaviana te hiala sasatra eo anelanelany hihinana zavatra. Na izany aza, marihina fa ny mpianakavy iray dia tsy maintsy mitondra kitapom-batsy miaraka amin'izy ireo amin'izay ahafahana mitondra ny sakafo. Rehefa nangonin'ny mpianakavy ny kojakoja rehetra nilainy tamin'ny fitsidihana bisikileta dia tokony hojerena indray ireo bisikileta.
Alohan'ny hanombohan'ny fitsidihana bisikileta dia tokony hanokana fotoana hijerena am-pilaminana ny bisikiletany ny mpianakavy. Ohatra, misy dikany ny mijery raha manana rivotra ampy ny kodiarana. Raha tsy izany no izy dia azo atao ny manampy rivotra bebe kokoa amin'ny kodiarana alohan'ny hiainganana mba tsy hisy olana rehefa mitondra fiara. Tsara ihany koa ny manamarina ny frein.
Ho fanampin'izay, tokony hojerena indray raha mandeha ny jiro raha mitohy hatramin'ny hariva ny fitsangatsanganana bisikileta. Raha tsy mahafehy ny bisikiletany ny ankizy dia afaka mandray an-tanana an'io asa io ny ray aman-dreny. Amin'ny alàlan'ny fanamarinana ireo bisikileta, ny lesoka rehetra amin'ny bisikileta dia azo arahana ary ahitsy.
Ilaina indrindra ny manamarina ny bisikileta raha tsy nampiasaina hatry ny ela ny bisikileta. Tokony ho azo antoka koa fa mifanaraka tsara ny fiarovan-doha amin'ny bisikileta. Aorian'ny fizahana ny bisikileta dia afaka manomboka amin'ny bisikileta ny fitsidihana.
Ny hazakazaka am-pianakaviana amin'ny bisikileta dia tsy fifaninanana hazakazaka ary noho izany dia tokony hifidy hafainganam-pandeha izay hain'ny mpianakavy rehetra tsy misy olana. Tsy ny hahatongavanao any amin'izay alehanao araka izay haingana indrindra. Ny fianakaviana dia manana fotoana handaniana fotoana, satria amin'ny fitsangatsanganana bisikileta miaraka amin'ny fianakaviana dia tsy misy antony handaniana fotoana mampiady saina.
Ny bisikileta dia tokony hoheverina ho fomba iray hananana fotoam-pianakaviana mavitrika. Raha mandray anjara amin'ilay fitsangatsanganana ireo mpianakavy tanora dia tokony hataon'ny olon-dehibe antoka fa afaka manohy ny diany ny ankizy, satria ny bisikileta dia mety ho mavesatra tokoa amin'ny dia lavitra.
Ny fitsangantsanganana ataon'ny fianakaviana amin'ny bisikileta dia tokony hahafinaritra voalohany indrindra. Raha efa nahatratra taona somary matotra kokoa ny ankizy dia azo atao ny misafidy làlana somary sarotra kokoa amin'ny fitsangatsanganana. Na izany aza, ao amin'ny fanahin'ny fitsangantsanganana an-tokantrano no misafidy làlana izay azon'ny mpianakavy atao rehetra aleha nefa tsy mila miasa mafy loatra.
Mandritra ny diabe mamakivaky ny natiora, ohatra, ny fianakaviana dia afaka mankafy ny endrika mahafinaritra nefa tsy mamela ny fihenjanana hiseho. Ny fianakaviana izay tia mitaingina bisikileta dia afaka mifalifaly amin'ny fitsangatsanganana iray. Ny olona ao amin'ny fianakaviana dia afaka mandany fotoana kely amin'ny rivotra madio ary hihetsika amin'ny fotoana iray.
Rehefa avy nitondra fiara lavitra dia mety tsy hahatsapa ny fianakaviana ny hiverina any aoriana any. Afaka mamantatra mialoha ny fianakaviana raha misy ny mety fampiasana fitaovana fitaterana hafa amin'ny dia hiverina. Amin'ny toe-javatra sasany, manana fotoana mety ianao hiverina amin'ny lamasinina na bus ary hitondra ny bisikiletanao. Amin'izany fomba izany, ny mpianakavy dia afaka mandeha an-trano amin'ny fomba milamina sy mitsitsy angovo. Rehefa miverina ianao dia tsy maintsy mamerina ny bisikileta amin'ny toerany. Mandreraka ny fitsangantsanganana ataon'ny mpianakavy amin'ny bisikileta fa mety hahafinaritra be ho an'ny fianakaviana izany.
Fidirana ao amin'ny akanin-jaza - andro voalohany tao amin'ny akaninjaza
Sekoly Montessori | Safidin'ny sekoly
Sekolin'i Waldorf | Safidin'ny sekoly
Misafidy ny sekoly mety
Geocaching | Hetsika voajanahary
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 14. March 2021 15. Jolay 2021 Sokajy Fialam-boly & fialamboly, Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena, Fialan-tsasatra, fitsangatsanganana ary fialan-tsasatraKeywords bisikileta, tsingerin'ny, Fitsidihana bisikileta, tsingerin'ny
indray Lahatsoratra taloha: Kilasy fandihizana an-tserasera
more Lahatsoratra manaraka: Fitness sy fanatanjahan-tena